Maalinta: Diseembar 3, 2019
Magaalada Caalamiga ah ee Cimilada, Deegaanka iyo Caafimaadka 2-4 waxaa lagu qaban doonaa Abriil 2020 magaalada Ankara; Waxaan ku nool nahay xaafadaha, degmooyinka, gobollada, gobollada, qaaradaha, jasiiradaha iyo dhammaan meelaha quruxda badan; Ka wada hadalka adduunkeena wadajirka [More ...]
Buundada Kayseri Derevenk, oo ay soo saartey Freysaş iyadoo la adeegsanaayo habka loo adeegsado qalabka dheellitirka ee loo yaqaan 'console system', ayaa la galiyay xafladda furitaanka ee uu qabtay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo wafdiga la socda. Taariikhda furitaanka 31 [More ...]
Qeybta Ciidanka Booliska Magaalada Qeybta Boliiska ee Qeybta Gaadiidka iyo Amniga Qeybta Gaadiidka iyo Amniga iyo Agaasinka Gaadiidka Dadweynaha ayagoo wata gawaarida S-plate-ka iyo gawaarida xamuulka dadweynaha ayaa waxaa kormeeray kooxaha. 19 [More ...]
Ankara Bad News ..! Khidmadaha Gawaarida leh Xannaanada 1 Lira; Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara, 1 rodol, oo ay baajisay Maxakamadda Maamulka Degmadu waxay ku dhawaaqaysaa khidmadaha baarkinka. Khidmadaha baarkinka ee dowladda hoose ee Ankara [More ...]
Guddiga Qorsheynta iyo Miisaaniyadda ee baarlamaanka, CHP Tekirdag kuxigeenka Dr. İlhami Özcan Aygun, Shilka Tareenka Çorlu iyo Shilalka Tareenka Sare ee Ankara [More ...]
Mersin, oo ay ku adag tahay inuu ka helo amaahda bangiyada dawladda ee la xidhiidha maal-gashiga nidaamka tareenka, ayaa dibedda u aaday. Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Vahap Seçer ayaa yidhi, Wem Waxaan raadineynaa amaah ka timid dibada. Waxaan rabnaa inaan siinno maalgelin iyo dhismaha meheradda meel ” [More ...]